संसारकै स्वस्थ्य खानेकुरा के हो तपाईलाई थाहा छ ? - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»संसारकै स्वस्थ्य खानेकुरा के हो तपाईलाई थाहा छ ?
By रिता घिसिंग on १६ फाल्गुन २०७४, बुधबार ०५:२० स्वास्थ्य/जीवनशैली
हामी कसरी तन्दुरुस्त र स्वस्थ्य रहने भन्ने कुरामा केहि अध्ययन/अनुसन्धान भएको छ । हाम्रो स्वास्थ्यसँग खानपानको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहन्छ । अध्ययनबाट यस्ता खानपानको सूची तयार गरेका छन्, जसले हाम्रो शरीरलाई लाभ गर्छ ।
बदाम प्रोटीनको राम्रो स्रोत हो । यसमा मोनो अनसेचुरेटेड फ्याट हुन्छ, जसले हृदयलाई स्वस्थ्य राख्छ । दिनहुँ पाँच देखि सात वटा बदाम खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ । १ सय ग्राम बदाममा ५ सय ९७ किलो क्यालोरी हुन्छ । वैज्ञानिक अनुसार यसको पोषक स्कोर हो, ९७ ।